AKHRISO:- Puntland oo mamnuucday shirar aan fasax looga haysan in lagu qabto gobolka Mudug. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandAKHRISO:- Puntland oo mamnuucday shirar aan fasax looga haysan in lagu qabto gobolka Mudug.
AKHRISO:- Puntland oo mamnuucday shirar aan fasax looga haysan in lagu qabto gobolka Mudug.
July 17, 2019 marqaan Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 0
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee dowladda Puntland Axmed Muuse Nuur Yare ayaa amar ku bixiyay in la joojiyo shirarka aan ogolaanshaha ka haysan maamulkiisa ee lagu qabto gobolka Mudug.
Qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha ayaa lagu amray dhammaan mas’uuliyiinta degmooyinka gobolka Mudug in ay joojiyaan wixii shirar ah oo aan ogolaansho ka haysan maamulka gobolka Mudug.
“waxaa la farayaa dhammaan guddoomiyeyaasha Degmooyinka inaan hoteellada magaalooyinka lagu qabankarin wax shir ayadoon ogolaansho laga haysan maamulka gobolka” ayaa lagu yiri qoraalka.
Go’aankan ayaa la qaatay kadib markii la arkay baahida loo qabo sugidda amniga gobolka iyo ilaalinta sharciga si looga hortago tallaabo kasta oo wax u dhimaysa jiritaanka maamulka dowliga ah sida qoraalka ku cad.
“Ayadoo laga duulayo baanhida loo qabo sugidda nabadgelyada gboolka, iyo fulinta sharciga, waxaa lagama maar maan ah in laga hortago tallaabo kasta oo wax u dhimaysa jiritaanka maamulka dawliga ah” ayuu sii raaciyay.
MD Deni oo Degmo kabaxday gacanta Somaliland umagacaabay Maareeye Garoon diyaaradeed.
DAAWO:- Xisbiga Wadani “Wasiir Kaahin ha is casilo, Biixina faanka ha joojiyo waayo Gini wasiir buu kula soo kulmay”.